(Xog Cusub);-Ganacsatada Gobolka Banaadir oo Bahdilaad Ku Sameeyey Puntland iyo Kdib Markii ay Joojiyeen.. | Allpuntland24.com
(Xog Cusub);-Ganacsatada Gobolka Banaadir oo Bahdilaad Ku Sameeyey Puntland iyo Kdib Markii ay Joojiyeen..
Madaxweyne Gaas oo la aamusiyay iyo ganacsato Xamar kasoo jeeda oo dagaal kula jira Puntland iyo Shirkadii Daalo Airland oo joojisay duulimaadkii Garowe.
Muqdisho Shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland waxay dhibaato weyn ka tirsanayaan gudashada waajibaadka Xajka, dhibta u weyn waxay kala kulmaan shirkadaha duulimaadyada ee qaabilsan qaaditaanka iyo dejinta xujeyda.
Xukuumadda federaalka ayaa wada dedaal wax loga bedalaayo nidaamka Xajka, oo sanadkan loo qorsheyeeyey Soomaaliya 9000 oo Xujey ah, Xukuumadda federaalku waxay qorsheyneysaa in ay noqoto tartan furan oo aan loo xirin keliya Jubba iyo Daallo.
Waxa hadda soo baxdey shirkadda Occean Airlines oo u kiraysan ganacsato Soomaaliyeed oo reer Puntland ah, taas oo hadda loo qorsheeyey in ay hesho 33% Xujeyda sanadkan, laakiin shirkadaha Jubba iyo Daalo oo adeegsanaya siyaasiyiin xilalka ka haya dowladda federalka, ayaa doonaysa inay meesha ka saaraan shirkada Occean Airlines.
Madaxweyne Gaas ayaan weli si toos ah u cadeynin mowqifkiisa ku saabsan hagardaamada shirkadahaan cuuryaamiyay horumarka Puntland islamarkaana horey udiiday inay garoomada caalamiga ah ee Garowe iyo Bosaso ka sameeyaan duulimaadyo caalami ah, hadana doonaya inay afduub kusii haystaan mashruuca Xujeyda.
Inkastoo wasiirka cadaalada Puntland uu dhawaan si aan gambasho lahayn uga hadlay dhibaatadaan shirkadahaan, ayay hadana umuuqataa inuusan dhawaqiisu meel fog gaarayn ma, waxaana taas kuu cadeynaya markii wiil yar oo Jubba Airways u fadhiya Bosaso uu wasiirka ku tilmaamay nin aan waxba ogayn oo been low ah.